milina famehezana induction ho an'ny fizotry ny famehezana alimina
Home / Masinina famehezana induction / milina famehezana induction ho an'ny foil aluminium
Sokajy: Masinina famehezana induction Tags: aluminium dia afaka mampiditra tombokase, tombo-kase fampidirana aluminium foil, famehezana induction foil aluminium, tombo-kase aluminium foil, milina fanamafisam-peo aluminium, mividy tombo-kase fampidirana, masinina fitomboka, masinina famehezana cap, milina famehezana foil, tombo-kase fampidirana, masinina famehezana cap, tombo-kase fampidirana, vidin'ny tombo-kase fampidirana, famehezana fampidirana, milina famehezana induction, masinina famehezana
Masinina famehezana induction ho an'ny foil aluminium
Inona no atao hoe famehezana induction?
Famehezana induction dia fomba tsy mifandray amin'ny fatorana fitaovana vita amin'ny thermoplastics amin'ny alàlan'ny fampidirana electromagnetic izay miteraka onja mandehandeha hampafana ny fitaovana. Ao amin'ny indostrian'ny fonosana, ity fomba ity dia ampiasaina hanisy tombo-kase takelaka fitoeram-bokatra izay misy tombo-kase laminate azo fehezin'ny hafanana. Raha ny momba ny Fitaovana Sealer Induction Aluminium anay, ny laminate foil dia liner induction heat aluminium.
Product Material Inôksa
Diameter famehezana 50-120mm
Hafainganana famehezana Tavoahangy 20-50 / min
Ny hafainganam-pandeha famindrana 0-12.5m / min
Haavony famehezana 20-280mm
fahan'ny TOSIKARATRA Dingana tokana, 220V, 50Hz
Fitaovana azo ampiharina Sarimihetsika tavoahangy vita amin'ny tavoahangy plastika
Lafiny (L * W * H): 1005 * 440 * 390mm
Inona no atao hoe milina fanamafisana vita amin'ny aliminioma?
Hatramin'ny masinina famehezana induction foil dia ampiasaina amin'ny kaontenera famehezana amin'ny alàlan'ny foil aluminium, ny sasany kosa miantso azy ireo hoe:
Aluminium afaka mamefy / fitaovana
Masinina / fitaovana famehezana alimina
Aluminium afaka seam seam milina / fitaovana
Ireo milina fonosana ireo dia ampiasaina hamehezana herinaratra fitaratra sy fitoeran-javatra plastika amin'ny alàlan'ny famehezana fampidirana mba hanitarana ny andian'ny vokatra, hisorohana ny famoahana, ary indrindra hanomezana tombo-kase mazava ho azy. Ny induction aluminium foil dia afaka milina manjaitra amin'ny alàlan'ny herinaratra, tànana ary famolavolana tanana amin'ny famehezana ny haben'ny fanidiana isan-karazany.
Inona no atao hoe Liner Induction Heat?
Hitanareo ireo zavatra manarona kaontenera tavoahangy sy siny ireo rehefa manokatra vokatra fonosana toy ny dibera voanjo na fanafody tavoahangy. Ny liner induction heat aluminium dia foil volafotsy eo am-panokafana fitoeram-pahefana iray izay manaporofo fa voaporofo ny vokatra voaangona. Izy ireo dia mila induction foil aluminium afaka manisy tombo-kase fitaovana mba hamehezana tsara ireo liner ireo amin'ny kaleta.
Ankoatr'izay, ny liner induction heat aluminium mahazatra ao anaty satrony dia tombo-kase maro sosona vita avy amin'ireto sosona stratejika sy lamina manaraka ireto ireto:
Takelaka taratasy vita amin'ny pulp
Ny sosona avo indrindra, dia ny sosona takelaka vita amin'ny pulp, dia misy akany manarona ny vatan'ilay fonony ary miraikitra aminy. Arahan'ny sosona savoka iray izay ampiasaina hamatorana ny sosona polpara amin'ny sosona fahatelo, ny foil aluminium, izay ilay sosona izay mifikitra amin'ilay kaontenera. Ny sosona farany eo amin'ny farany ambany dia ny sosona polymer izay toa film plastika.
Ireo sosona efatra ireo dia miara-miasa mba hahatratrarana ny dinamika ilaina amin'ny fizotran'ny induction mahomby mba hamokarana tombo-kase.
Fampiharana famehezana induction
HLQ masinina famehezana induction foil ho an'ny satroka visy dia mety amin'ny famehezana sakafo, zava-pisotro, vokatra ara-pitsaboana, ary kosmetika ankoatry ny hafa amin'ny endrika tavoahangy isan-karazany, toy ny tavoahangy boribory sy toradroa, vita amin'ny plastika.
Ankoatr'izay, etsy ambany ireo indostria sy vokatra isan-karazany izay azon'ny LPE atao amin'ny milina manaingo.
Indostrian'ny zava-pisotro Divay, labiera am-bifotsy, soda, rano, cider, ranona, kafe sy dite, zava-pisotro misy karbonina
Food Industry Hena, hazandranomasina, legioma, voankazo, saosy, Jam, Tuna, lasopy, rongony, tantely, vovo-tsakafo, sakafo maina (toy ny voanjo, voamadinika, vary, sns)
Indostrian'ny fitsaboana Fitaovam-biby, famatsiana ara-pahasalamana, vovoka, pilina, akora vita amin'ny fanafody
Indostria simika Menaka fandrahoan-tsakafo, menaka lafaoro, lakaoly, loko, akora simika amin'ny toeram-pambolena, ranon-javatra fanadiovana, ranomainty sy lacquer, fako nokleary sy akora radioaktifa, Fluide Automotive (lasantsy, solika ary diesel)
Ahoana ny fomba fiasan'ny milina fanamafisam-peo aluminium
Ny fizotran'ny famehezana fampidirana dia manomboka amin'ny alàlan'ny famatsiana fangaro cap-container efa feno vokatra amin'ny induction aluminium foil dia afaka milina fametahana. Ny sarom-bilany dia efa manana kofehy fampidirana hafanana aluminium alim-pito nampidirina tao alohan'ny nifindrany tao anaty kaontenera.
Ny fitambaran-kaontenera cap-container dia mandalo eo ambanin'ny loer seam, izay mamoaka saha elektromagnetika mihetsiketsika, amin'ny alàlan'ny conveyor mihetsika. Rehefa mandalo eo ambanin'ny loer seam ny tavoahangy, dia manomboka mihafana ny liner induction heat heat aluminium noho ny onjan-drano. Ny savaivony, izay sosona faharoa amin'ny valin'ny induction, dia miempo ary tototry ny sosona avo indrindra - ny sosona taratasy vita amin'ny pulp.
Rehefa miempo tanteraka ny sosona savoka dia mivoaka avy eo amin'ny sarony ny sosona fahatelo (ilay sosona foil aluminium). Ny sosona farany vita amin'ny liner, ny sosona polimerika koa dia manafana sy mitsonika amin'ny molotry ny fitoeran-plastika. Raha vantany vao milamina ny polymer, ny fifamatorana vita eo anelanelan'ny polymer sy ny fitoeran-javatra dia mamokatra vokatra voaisy tombo-kase.
Ny fizotran'ny famehezana iray manontolo dia tsy misy fiantraikany ratsy amin'ny vokatra ao anaty kaontenera. Na dia azo atao aza ny miseho amin'ny foil overheating izay miteraka fahasimbana amin'ny soson'ny tombo-kase izay miteraka tombo-kase diso. Mba hisorohana an'io, ny LPE dia manao fanaraha-maso kalitao mahery vaika amin'ny alàlan'ny fizotry ny famokarana manontolo amin'ny induction aluminium foil anao izay afaka manamboatra fitaovana.
Alohan'ny fizotry ny famokarana dia manao consultation betsaka miaraka aminao izahay mba hahatakarana tsara izay ilainao. Manampy amin'ny famaritana ny rafitra ilaina ilaina amin'ny fikirakirana vokatra manokana toy ny haben'ny masinina ilaina amin'ny tsipika famonosana azo antoka.